Moments leh saaxiibo 32
Miyuu suurtogal ah in fikradda laga saaro maskaxda? Hadday sidaas tahay, sidee baa loo sameeyaa? Sidee ayaa looga hortagi karaa soo noq-noqoshada oo ka ilaalin kartaa maskaxda?
Waxaa macquul ah in fikradda laga saaro maskaxda, laakiin suurtagal maaha in fikradda laga saaro maanka illaa inta aan ka bixin karno meel ka baxsan guriga. Sababta ay dad badani u awoodi waayaan inay sii wataan fikrado aan loo baahnayn, oo aanay awoodin inay ka fekeraan khadadka qeexan, waxay u maleynayaan inay rumaysan yihiin fikradda baahsan ee ay tahay in ay fikrado ka dhiibtaan maskaxdooda. Waa wax aan macquul aheyn in qofku maskaxdiisa ka fekero, sababtoo ah isagoo u fiirsanaya fekerka waa in la siiyo fikradda, halka maskaxdu ay siinayso dareenka fekerka ah ee aan macquul ahayn in laga takhaluso fikirkaas. Kii yiri: Ka tag maskaxda xun, ama, kama fekerayo arrintan ama taasi, waxa maskaxda ku haynaya si ammaan ah sida sidii loo hirgeliyey. Haddii qofku naftiisa u sheego inuusan u malaynaynin arinkan ama waxaas, waxa uu noqon doonaa sida jilicsanaanta iyo jilicsanaanta iyo jimicsiyada kuwaas oo sameeya liiska waxyaalaha aysan ka fekereynin kadibna sii wadi doonaan liistadan liiska maskaxda iyo kuwaas oo fikradaha maskaxdooda ka baxa oo guul daraystaan. Sheekada gaboobay ee "The Great Green Bear" waxay muujineysaa tan aad u wanaagsan. Dhaqdhaqaaq saxaafadeedka ayaa lagu ciribtiray mid ka mid ah ardaydiisa oo doonaya in loo sheego sida loo wareejiyo ledta dahabka. Macallinkiisa ayaa u sheegay ardayga inuusan sameyn karin, inkastoo loo sheegay, sababtoo ah ma uusan aqoon. Marka uu ardayga dalbaday, ardaydu waxay go'aansadeen in ay ardayga baraan cashar waxaana u sheegay in socdaalka socdaalka maalinta xigay uu ka tagi lahaa qaabka uu ku guuleysan lahaa haddii uu awooday inuu raaco dhammaan tilmaamaha , laakiin waa inay noqotaa mid lagama maarmaan u ah bixinta dareenka ugu dhow ee caanobooraha iyo inuu noqdo mid sax ah faahfaahin kasta. Ardaygu wuu ku faraxsanaa isla markaana si daacad ah u bilaabay shaqadii xilkii loo qabtay. Wuxuu raacay tilmaamaha si taxadar leh wuxuuna ahaa sax u ahaa diyaarinta qalabkiisa iyo qalabkiisa. Waxa uu arkay in dhuxusha tayada saxda ah iyo xajmiga ay ku jirtey xabsiyada habboon, iyo heerkulka loo baahan yahay ayaa la soo saaray. Waxa uu ka taxadarey in uumiifayaashu dhammaantood la ilaaliyo oo ay soo maraan alembiyada iyo dib-u-celinta, waxayna ogaadeen in lacagahaas ka yimid kuwan sida saxda ah lagu sheegay. Dhamaan arrimahan ayaa sababay farxad aad u badan, madaama uu la socday tijaabadii uu ku kasbaday kalsoonidii ugu dambeysay. Mid ka mid ah xeerarku wuxuu ahaa inuusan akhriyin qaaciddada laakiin waa inuu raacaa kaliya marka uu sii waday shaqadiisa. Markii uu sii socday, wuxuu u yimid bayaankan: Hadda oo tijaabadu socotay ilaa hadda iyo in birtu ku jirta kulaylka cad, waxay qaadataa wax yar oo ah budada guduudka ah ee u dhexeysa farta iyo suulka gacantooda midig, xoogaa yar oo budada cad inta u dhaxaysa farta iyo suulka gacanta bidix, u istaag ballaadhanka cad ee aad hadda haysato ka dibna diyaar u noqo inaad ka tagto budooyinkan kadib markaad addeecdo amarka xiga. Ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu sameeyey sida loo dalbaday oo uu akhriyey: Waxaad iminka gaartay imtixaanka muhiimka ah, guushuna waxay raaci doontaa oo keliya haddii aad awooddo inaad addeecdo waxyaalahan soo socda: Ha ka fekerin culeyska cagaaran oo hubi inaadan ka fekerin weyn oo cagaaran. Ninkii dhallinyarada ahaa ayaa neefsanaya. "The weyn cagaarka cagaaran. Maaha inaan ka fekero culeyska cagaaran, "ayuu yiri. "The weyn cagaaran weyn! Waa maxay cagaarka cagaaran ee weyn? Maya, kama fekerayo cagaarka cagaaran ee weyn, laakiin, waan qalloocinayaa, aniga Anigu, isaga oo ka fakaraya cawska weyn ee cagaaran. "Siduu sii waday inuu ka fekero inaanuu ka fekerin cidda weyn ee cagaaran wax uu ka fekerin karo wax kale, illaa iyo ugu dambeyntii u dhicin isaga oo ah inuu la socdo tijaabadiisa iyo inkastoo fikradda ah Cafis weyn oo cagaaran ayaa weli maskaxda ku jirtay isaga oo u beddelay qaaciddada si loo arko waxa xiga amarka soo socda oo uu akhristay: Waxaad ku guuldareysatey maxkamad. Waxaad ku guuldareysatay xilliga muhiimka ah sababtoo ah waxaad u ogolaatay in aad ka soo qaadato shaqada si aad uga fekerto culeys weyn oo cagaaran. Kuleylka foornada lama kaydin, qadarka saxda ah ee uumiga ayaa ku fashilmay in uu ku gudbiyo tan iyada oo dib u celinaysa, oo aan waxtar lahayn hadda in uu ka dhigo budada guduudka ah iyo cadaanka.
Fikrad ayaa weli maskaxda ku haysa illaa inta fiiro gaar ah loo siiyo. Marka maskaxdu ay joojiso in ay feejignaato mid feker ah oo ay u dhigto fikrad kale, fekerka dareenka ah ayaa weli ku jira maskaxda, iyo wixii aan danta lahayn. Habka looga takhaluso fikradda waa inaad maskaxda ku hayso oo aad si joogto ah ugu noqotid mawduuc qeexan iyo mid gaar ah. Waxaa la ogaanayaa in haddii arrintan la dhammeeyo, fikradaha aan la xiriirin mawduuca waxay ku wareegi karaan maskaxda. Inkasta oo maskaxdu ay rabto wax fikradeedu waxay ku soo laaban doontaa waxkasta oo ah rabitaan, sababtoo ah rabitaanku waa sida xarun culeyska oo maskaxdana soo jiidata. Maskaxdu way ka madax banaan tahay rabitaankaas, haddii ay rabto. Hannaanka laga xoreeyo waa in uu arko oo uu fahamsan yahay in rabitaanku uusan aheyn kan ugu fiican oo ka dibna go'aan ka gaaraya wax ka wanaagsan. Marka maskaxdu go'aamiso mawduuca ugu fiican, waa inay fikraddeeda u jeedisaa mawduuca iyo feejignaanta waa in la siiyaa mawduuca kaliya. Nidaamkan, bartamaha culeyska ayaa laga beddeley rabitaanka hore ee maadada cusub. Mind u go'aaminayaa meesha uu ku yaalo xarunta culeyska. Si kasta oo mawduuc ama shaybaarka maskaxiyan u socdo, fikraddiisu waa. Marka maskaxdu waxay sii socotaa inay bedesho mawduuceeda fikradeeda, oo ah bartilmaameedkeeda, illaa ay barto inay barto cufnaanta lafteeda. Marka arrintan la dhammeeyo, maskaxdu waxay isku darsataa midabkiisa iyo hawlaha, iyada oo loo marayo wadooyinka dareenka iyo xubnaha dareenka. Maskaxda, ma aha inay ka shaqeyso dareenkeeda ku aadan dunida muuqaalkeeda, iyo barashada inay u jeediso tamarteeda, lafteedna waxay u toosisaa xaqiiqada dhabta ah ee ka timaada jidhkeeda iyo jidhkeeda. Markaa sidaas oo kale, maskaxda kaliya ma ogaanayso nafteeda dhabta ah, laakiin waxay ogaan kartaa isku kalsoonaanta dhabta ah ee dhammaan dadka kale iyo dunida dhabta ah ee ku soo gala iyo kuwa kaleba.
Hantidaas oo kale lama heli karo hal mar, laakin waxaa la xaqiijin doonaa natiijada ugu dambeysa ee fekerka aan fiicnayn maskaxda ku hayno adoo ka qaybgalaya iyo ka fekeraya kuwa kale ee la jecel yahay. Qofna markiiba ma awoodo in uu ka fikiro fikirka kaliya ee uu rabo inuu ka fekero iyo sidaas darteed ka saarida ama looga hortago fikradaha kale ee ka imanaya maskaxda; laakiin wuxuu awoodi doonaa inuu sidaas sameeyo haddii uu isku dayayo oo uu sii wado isku dayga.